Ahoana no manadio akanjo ba ba nataony
1. Mino ny mpanamboatra akanjo mafana fa ny volo vita am-paty dia tokony hosorana vovoka ary alemana anaty rano mangatsiaka mandritra ny 10-20 minitra alohan'ny hanasana. Aorian'ny famoahana azy, esory ny rano, ataovy ao anaty vahaolana vovoka na vahaolana savony savony ary kosohy moramora, avy eo ...
Fitandremana amin'ny fanadiovana akanjo ba ba nataony
1. Fantatry ny mpanamboatra akanjo mafana fa mora simba ny akanjo ba ba nataony, ka tsy afaka misintona azy mafy ianao mba hialana amin'ny bikan'ny akanjo ary hisy fiantraikany amin'ny tsiro fanaonao. 2. Rehefa avy nanasa dia tokony ho maina ao anaty alokaloka ny akanjo ba ba nataony, ahantona amin'ny toerana misy rivotra sy maina ...
Fanjairana sy tenona
Fantatry ny mpanamboatra akanjo mafana fa ny mahasamihafa indrindra ny tenona sy ny knit dia: ny tenona dia natao tamin'ny alàlan'ny famolavolana sy ny weft, ka misy lafiny roa amin'ny fikororohana sy kofehy. Fa ny knitting dia vita amin'ny tadivavarana izay voafatotra tsy tapaka, noho izany dia manana mari-pahaizana ...
Lamba baoty mahazatra
1. Acetate fibre (Acetel) lamba namboarina sweater mpanamboatra acetate fibre acetate manana fananana miavaka toy ny landy, fibre luster ary loko mamirapiratra, drape sy fahatsapana tena tsara. Ny lamba ba nataony vokariny dia manana fahatsapana milamina amin'ny tanany, manao akanjo milay, mandray ny hamandoana ary ...
Teknika fifantina dimy amin'ny fisafidianana ny akanjon'ny ankizy voatenona
Wang: mino ireo mpanamboatra akanjo mafana fa tsy afaka mijery ny vidiny fotsiny ianao rehefa mividy akanjo, fa ny kalitao no lakileny. Fofona: Aza mividy akanjo misy fofona manitra; fadio ny mividy akanjo efa voatsabo amin'ny anti-ketrona sy mihosin-jaza ho an'ny ankizy. Fanontaniana: ...
Inona avy ireo fizotry ny haingon-trano ao amin'ny ozinina fanodinana akanjo ba ba nataony
Ny orinasan-damba fanodinana knitwear dia ny fanodinana ireo vokatra efa vita sy ny akora ho akanjo. Ny ankamaroany dia manondro ny fanampina volom-borona, boribory, bokotra, pompom, kofehy ary kojakoja hafa amin'ny fitafiana, na fakana kofehy, voninkazo, fitalahoana ary fitalahoana. Mampiasà sp ...
Ny fifantohana dia tokony homena ny fizotry ny famokarana akanjo vita amin'ny ba nataony
1. Ny mpamatsy akanjo ba dia mino fa tena zava-dehibe ny fitsapana ny fihenan'ny lamba alohan'ny fanapahana sy fanitsiana ny lamina arakaraka ny fihenan'ny. 2. Ny fizotry ny fitafiana ba nataony dia ny overhang, izay miankina amin'ny hakitroky, ny sakany, ny lokony ary ny quali ...
Ny fahaiza-manao amin'ny fampifanarahana loko amin'ny firavaka ba nataony
1. Mena misy fotsy, mainty, manga-volondavenona, beige ary volondavenona. 2. Pink miaraka amin'ny volomparasy, volondavenona, maitso maitso, fotsy, beige, volontany, manga ary manga. 3. Mena mena misy fotsy, mainty sy manga. 4. Mavo miaraka amin'ny volomparasy, manga, fotsy, volontany, mainty. 5. Volontany misy beige, mavo goose, mena biriky, manga-mena ...
Ny niandohana sy ny fampandrosoana ny akanjon'ny lehilahy vita amin'ny ba nataony
Ny akanjo dia nipoitra teo am-piandohan'ny fampandrosoana ny fiarahamonin'olombelona. Ny olona taloha dia nanao «fitafiana» tsy madio miaraka amina fitaovana isan-karazany izay hitany ny manodidina azy ireo mba hiarovan-tena. Ny akanjon'olombelona voalohany dia vita tamin'ny hoditra biby, ary ny "lamba" voalohany indrindra ...